Motorola ရဲ့ G7 Series ဖုန်း ပုံများ ထွက်ပေါ်လာ | MyTech Myanmar
Motorola ရဲ့ G7 Series ဖုန်း ပုံများ ထွက်ပေါ်လာ
Motorola ရဲ့ နာမည်ကြီး Mid-range Series ဖြစ်တဲ့ G Series ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် G7 Series ရဲ့ ဖုန်း ဒီဇိုင်းတွေပေါ်ထွက်လို့လာပါပြီ။ အဆိုပါ ပုံတွေဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်နေကနေ ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့် Moto G7 Series ကို အရင် မှန်းထားတဲ့ အချိန်ထက် အများကြီး စောပြီး မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ ပုံတွေမှာ G7 Series မှာပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတွေအကုန်လုံးရဲ့ ဒီဇိုင်းကို အသေးစိတ်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ထူးခြားချက်ကတော့ G7 Series မှာ ပါဝင်တဲ့ မော်ဒယ် တစ်မျိုးစီကို အရောင် တစ်မျိုးစီနဲ့ မြင်တွေ့ရတာပါ။ Moto G7 Series မှာ Moto G7, G7 Plus, G7 Play နဲ့ G7 Power ဆိုပြီး မော်ဒယ် လေးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်းပဲ Moto G7 ကို အဖြူရောင် ကာလာနဲ့ မြင်တွေ့ရပြီး အရင် Moto G ဖုန်းတွေလိုပဲ နောက်ကျောဘက် ခုံးနေတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ပါ။ အကြီမားဆုံး အပောင်းအလဲကတော့ Notch Display ပဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ WaterDrop Notch နဲ့ပါ။ အနောက်ဘက် ကင်မရာ အထားအသိုလည်း ပြောင်းလဲသွားပြီး ကင်မရာ နှစ်လုံးတွဲ စနစ်ကို အရင်လို တစ်လုံးချင်းစီ ခွဲမထားတော့ပဲ ကြီးမားတဲ့ ကင်မရာ အိမ်ထဲမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း ပေါင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကင်မရာ အိမ်အောက်မှာတော့ Motorola Logo ကိုတွေ့ရပြီး Logo ကို Fingerprint Sensor အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အောက်ခြေမှာတော့ 3.5mm နားကျပ်ပေါက်နဲ့ USB Type C အပေါက်တွေကိုတွေ့ရပြီး စပီကာပေါက်လည်း တွေ့ရပါတယ်။
Moto G7 Plus ကိုတော့ Red Wine (ခေါ်) ဝိုင်နီ အရောင်နဲ့ မြင်တွေ့ရပြီး Plus ဗားရှင်းဖြစ်လို့ ရိုးရိုး Moto G7 ထက် Display ပိုမိုကြီးမားပြီး တစ်ခြား Spec တွေလည်း Moto G7 ထက် အနည်းငယ်မြင့်မှာပါ။ ဘက်ထရီ ပမာဏနည်း ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ Moto G7 နဲ့ အကုန်အတူတူဖြစ်ပြီး Notch Display အပါအဝင် အနောက် ဘက် ကင်မရာ အထားအသိုတွေလည်း အတူတူပါပဲ။
Moto G7 Play ကိုတော့ ရွှေအိုရောင် နဲ့တွေ့ရပြီး အပေါ်က ဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့ ကွဲပြားသွားတဲ့အချက်ကတော့ Display ထိပ်ဘက်က Notch ဖြစ်ပြီး အတော်လေးကြီးမားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိပ်ဘက် Notch ကြီးမားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ LED Flashlight ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင် Secondary Loud Speaker အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ခြေရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ Earpiece Speaker (ခေါ်) Receiver ကြီးကို တွေ့ရပါတယ်။ Play ဗားရှင်းဖြစ်လို့ Gaming Phone တစ်လုံး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး Cooling System တစ်မျိုးမျိုး ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ခြေဘက်မှာတော့ USB Type B Port ကိုတွေ့ရပါတယ်။
Moto G7 Power ကတော့ နာမည်အရပဲ Moto G7 Series မှာ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အပြာရင့်ရောင် နဲ့တွေ့မြင်ရပြီး G7 Play လိုပဲ ကြီးမားတဲ့ Notch ကိုတွေ့ရပြီး Moto G7 Series မှာ ဘက်ထရီ ပမာဏ အများဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Mid-range ပရိုဆက်ဆာထဲမှာမှ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး ပရိုဆက်ဆာတစ်မျိုးမျိုးအသုံးပြုပေးထားနိုင်ပြီး Snapdragon 730 ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Motorola ဟာ Build Quality အကောင်းဆုံး ဖုန်းတွေအဖြစ် နာမည်ကြီးနေပြီး ထူးခြားချက်အဖြစ် သူ့ရဲ့ Mid-range Series တွေဟာ Flagship တွေထက် နာမည်ပိုကြီးတာပါ။ တစ်ကယ်လို့သာ အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ Moto G7 Series ဖုန်းတွေ ပြည်တွင်းဝင်လာခဲ့ရင် ပရိတ်သက်ကြီးအနေနဲ့ ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးရှိလား? G7 Series အပေါ်ထင်မြင်ချက်တွေကို အောက်မှာ Comment ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
Motorola ရဲ့ နာမညျကွီး Mid-range Series ဖွဈတဲ့ G Series ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျ G7 Series ရဲ့ ဖုနျး ဒီဇိုငျးတှပေျေါထှကျလို့လာပါပွီ။ အဆိုပါ ပုံတှဟော ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သတငျးရငျးမွဈနကေနေ ပျေါထှကျလာတာကွောငျ့ Moto G7 Series ကို အရငျ မှနျးထားတဲ့ အခြိနျထကျ အမြားကွီး စောပွီး မိတျဆကျနိုငျပါတယျ။ အခုထှကျပျေါလာတဲ့ ပုံတှမှော G7 Series မှာပါဝငျတဲ့ ဖုနျးတှအေကုနျလုံးရဲ့ ဒီဇိုငျးကို အသေးစိတျမွငျတှရေ့ပါတယျ။ ထူးခွားခကျြကတော့ G7 Series မှာ ပါဝငျတဲ့ မျောဒယျ တဈမြိုးစီကို အရောငျ တဈမြိုးစီနဲ့ မွငျတှရေ့တာပါ။ Moto G7 Series မှာ Moto G7, G7 Plus, G7 Play နဲ့ G7 Power ဆိုပွီး မျောဒယျ လေးမြိုးပါဝငျပါတယျ။
ပုံမှာမွငျရတဲ့ အတိုငျးပဲ Moto G7 ကို အဖွူရောငျ ကာလာနဲ့ မွငျတှရေ့ပွီး အရငျ Moto G ဖုနျးတှလေိုပဲ နောကျကြောဘကျ ခုံးနတေဲ့ ဒီဇိုငျးမြိုးနဲ့ပါ။ အကွီမားဆုံး အပောငျးအလဲကတော့ Notch Display ပဲဖွဈပွီး ၂၀၁၈ နှဈကုနျပိုငျးမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ WaterDrop Notch နဲ့ပါ။ အနောကျဘကျ ကငျမရာ အထားအသိုလညျး ပွောငျးလဲသှားပွီး ကငျမရာ နှဈလုံးတှဲ စနဈကို အရငျလို တဈလုံးခငျြးစီ ခှဲမထားတော့ပဲ ကွီးမားတဲ့ ကငျမရာ အိမျထဲမှာ တဈစုတဈစညျးတညျး ပေါငျးပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ။ ကငျမရာ အိမျအောကျမှာတော့ Motorola Logo ကိုတှရေ့ပွီး Logo ကို Fingerprint Sensor အနနေဲ့လညျး အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဖုနျးရဲ့အောကျခွမှောတော့ 3.5mm နားကပျြပေါကျနဲ့ USB Type C အပေါကျတှကေိုတှရေ့ပွီး စပီကာပေါကျလညျး တှရေ့ပါတယျ။
Moto G7 Plus ကိုတော့ Red Wine (ချေါ) ဝိုငျနီ အရောငျနဲ့ မွငျတှရေ့ပွီး Plus ဗားရှငျးဖွဈလို့ ရိုးရိုး Moto G7 ထကျ Display ပိုမိုကွီးမားပွီး တဈခွား Spec တှလေညျး Moto G7 ထကျ အနညျးငယျမွငျ့မှာပါ။ ဘကျထရီ ပမာဏနညျး ပိုမိုမွငျ့မားနိုငျပါတယျ။ ကနျြတာတှကေတော့ Moto G7 နဲ့ အကုနျအတူတူဖွဈပွီး Notch Display အပါအဝငျ အနောကျ ဘကျ ကငျမရာ အထားအသိုတှလေညျး အတူတူပါပဲ။
Moto G7 Play ကိုတော့ ရှအေိုရောငျ နဲ့တှရေ့ပွီး အပျေါက ဖုနျးနှဈလုံးနဲ့ ကှဲပွားသှားတဲ့အခကျြကတော့ Display ထိပျဘကျက Notch ဖွဈပွီး အတျောလေးကွီးမားနတော တှရေ့ပါတယျ။ ထိပျဘကျ Notch ကွီးမားနရေတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ LED Flashlight ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့အပွငျ Secondary Loud Speaker အဖွဈ အသုံးပွုနိုငျခွရှေိတဲ့ ကွီးမားတဲ့ Earpiece Speaker (ချေါ) Receiver ကွီးကို တှရေ့ပါတယျ။ Play ဗားရှငျးဖွဈလို့ Gaming Phone တဈလုံး ဖွဈနိုငျခွရှေိပွီး Cooling System တဈမြိုးမြိုး ပါဝငျလာနိုငျပါတယျ။ အောကျခွဘေကျမှာတော့ USB Type B Port ကိုတှရေ့ပါတယျ။
Moto G7 Power ကတော့ နာမညျအရပဲ Moto G7 Series မှာ စှမျးဆောငျရညျ အကောငျးဆုံး ဖုနျးတဈလုံးဖွဈနိုငျပါတယျ။ အပွာရငျ့ရောငျ နဲ့တှမွေ့ငျရပွီး G7 Play လိုပဲ ကွီးမားတဲ့ Notch ကိုတှရေ့ပွီး Moto G7 Series မှာ ဘကျထရီ ပမာဏ အမြားဆုံးဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ Mid-range ပရိုဆကျဆာထဲမှာမှ စှမျးဆောငျရညျ အကောငျးဆုံး ပရိုဆကျဆာတဈမြိုးမြိုးအသုံးပွုပေးထားနိုငျပွီး Snapdragon 730 ဖွဈနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။
Motorola ဟာ Build Quality အကောငျးဆုံး ဖုနျးတှအေဖွဈ နာမညျကွီးနပွေီး ထူးခွားခကျြအဖွဈ သူ့ရဲ့ Mid-range Series တှဟော Flagship တှထေကျ နာမညျပိုကွီးတာပါ။ တဈကယျလို့သာ အပျေါမှာ ပွထားတဲ့ Moto G7 Series ဖုနျးတှေ ပွညျတှငျးဝငျလာခဲ့ရငျ ပရိတျသကျကွီးအနနေဲ့ ဝယျဖို့စိတျကူးရှိလား? G7 Series အပျေါထငျမွငျခကျြတှကေို အောကျမှာ Comment ပေးသှားနိုငျပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-21T15:32:55+06:30December 21st, 2018|Motorola, Tips & Stories|